Liberia oo diiwaan gelisay kiiskii labaad ee cudurka Ebola - BBC News Somali
Liberia oo diiwaan gelisay kiiskii labaad ee cudurka Ebola
2 Luulyo 2015
Image caption Haweeney ka shaqeysa caafimaadka oo bukaan ka baaraysa cudurka Ebola
Kiiskan labaad waxa uu ka dhacay isla magaaladii markii hore laga soo sheegay ee Nedowein, sida uu ku warramay wasiir kuxigeenka wasaaradda caafimaadka iyo madaxa guud ee la dagaalanka cudurka Ebola, Tolbert Nyenswah.
Qofka labaad ee dhibanaha ah ayaa la sheegay inuu yahay rag laakiin da’diisa ilaa hadda lama shaacin, waxaana laga helay cudurka maalintii Talaadada iyadoo loo soo qaaday goob lagu daweeyo.
Wasiir kuxigeenku waxa uu sheegay in labada qof ee uu cudurku ku dhacay iskumeel aanay gedanayn.
Islamar ahaantaa meydka qofkii hore ayaa la soo faagay, si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo kaddibna markale dib loogu duugo.
Dhimashada labadan qof oo ay dhowr maalmood un u dhaxaysay ayaa waxa ay markale gelisay shaqaalaha caafimaadka heegan buuxa oo dalka oo dhan ah.
Laakiin dowladdu waxa ay ku adkaysanaysaa mowqifkeedii ahaa in aanay marnaba xiri doonin soohdimaha ay la wadaagto dalalka Guinea iyo Sierra Leone, labadaasi dal oo laga soo tabiyay kiisas cusub.
Dadka ayaa lagu booriyay in ay sii wadaan tallaabooyinka ay kaga hortagayaan cudurka sida in gacmaha ay dhaqdaan.
Dhinaca kalana, inta u dhaxaysa 100 ilaa 200 oo ah shaqaalihii horay ula dagaalami jiray cudurka Ebola ayaa Arbacadii ku xoomay Wasaaradda Caafimaadka ee ku taalla magaalada Monrovia iyagoo halkaasi ku qabsaday saraakiishii halkaa joogtay.
Dadka banaanbaxayay ayaa waxa ay dalbadanayeen in la siiyo lacagaha dheeraadka ee ay aheyd in ay qaataan markii ay daweynayeen cudurkaasi halista ah.
Waddanka Liberia ayaa 9-kii bishii May waxaa looga dhawaaqay in cudurka Ebola uu ka dhamaaday.
Hasayeeshee Wasiirka Caafimaadka Bernice Dahn ayaa sheegay in Liberia ay bixisay boqolkiiba 99 lacagaha loogu tagalay khatarta ee la siinayay shaqaalaha, taasi oo ay usii dheerayd mushaar joogta ah oo la siinayay.